China Alucosun FR A2 ifektri kanye nabaphakeli | I-Alucosun
I-Aluminium Composite Panels (ACP / ACM) yimikhiqizo ehlukahlukene ehlanganisa izimfanelo zensimbi ezinamapulasitiki asebenza ngezindlela eziningi, ingumkhiqizo oguquguqukayo kodwa oqinile ngezindleko eziphansi ngokuqhathaniswa ezilungele izinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene ezinjengeFacade, Roof, Ceiling kanye nezinhlelo zokusebenza ezifanayo ezinjengokwakhiwa kabusha noma okusha isakhiwo. Indaba enikeza amathuba angenamkhawulo wokuklama iphupho lakho.
Kunezinhlobo ezahlukahlukene zemikhiqizo yokugqokiswa kwe-Aluminium, i-Alucosun® enikela embonini. Okugqame kakhulu yimikhiqizo eyinhlanganisela i-ACP / ACM sithathwa njengefemu ekwaziyo ukudala imikhiqizo esezingeni lomhlaba. Okungezwe kwikhwalithi yemikhiqizo esiyinikeza ukusayina kwethu ukuzibophezela ekufezeni izithembiso zethu kanye namasu wensizakalo yobuchwepheshe.
I-Alucosun ®I-Aluminium Composite Panel isethulo sethu esihle kakhulu embonini yezokwakha yomhlaba. Amapaneli we-Aluminium Composite athathwa njengenye indlela eyakhayo yezici eziningana kuma-Aluminium Panels kunezici eziningana ezenza ukuthi ihluke.
I-Alucosun FR® ihlolwe futhi iqinisekiswe yiLabs eyaziwa umhlaba wonke. Ama-FR Panels Class A2 no-B (EN13501) aqinisekisiwe ngenkathi namaphaneli wangaphakathi e-PE kungu-Class A (ASTME84) no-Class 0 no-1 (BS476Part6, Part7). Ngokwengeziwe, i-Alucosun FR inikezwe isitifiketi sokuhambisana neNFPA285 ne-ASTME-119.
I-Alucosun® imikhiqizo eyinhlanganisela ingukukhanya kwesisindo sokuqhathanisa namashidi we-olid metallic, ingilazi noma ama-facade afanayo atholakala kumark wamanje.
Ama-Aluminium AmaSpredishithi nhlangothi zombili kanye ne-3MM amaminerali amaminerali aminyene we-thermoplastic core ahlanganiswe ngokufudumele amafomu iphaneli eqinile ekwaziyo ukumelana namandla angaphandle esakhiweni sodonga olujwayelekile olungathwali mthwalo.
I-Alucosun ®I-ACP iyimikhiqizo emihle kakhulu eyisicaba enobukhulu obufanayo obenziwe ngemishini yobuchwepheshe obuphakeme kanye nemikhuba eqinile yokuQinisekiswa Kwekhwalithi; inikeza ukubukeka okuyisicaba futhi okumnandi ebusweni bokuyakha imvilophu.
I-ACP ingumkhiqizo ongaphinde usetshenziswe. I-Aluminium kanye nezinto ezisemqoka zisetshenzisiwe ziphinde zisetshenziswe, ngakho-ke i-ACP ithathwa njengomkhiqizo we-Eco-Friendly.
I-Alucosun®Ukuhlanganiswa ngamanzi noma okokuhlanza okuncane kungasusa uthuli nokungcola, izindlela zokufaka eziguquguqukayo ngendlela yokufaka esikhundleni samapaneli wokulungisa ngomonakalo wengozi njll. kukwenza kube umkhiqizo olondolozeka kalula.
Amaphaneli we-Aluminium ahlanganisiwe abiza imikhiqizo yemvilophi yokwakha eqhathanisa i-aluminium yensimbi yensimbi, insimbi engagqwali, inikeza ububanzi bokuqedwa okuhle kakhulu nemibala eqinile ongakhetha kuyo.
Umkhiqizo onhlobonhlobo ongaqanjwa kunoma iyiphi i-orshape design wenza kalula ukuthi amaphaneli we-Aluminium Composite ayingqayizivele futhi ayintandokazi yabakhi bezakhiwo ukudala imiklamo yabo yamaphupho kuyo.
Amaphaneli we-A2 aqukethe umnyombo onenhlanganisela enama-90% amaminerali angashisi ukuqinisekisa izinga eliphezulu lomlilo nokuphepha.
I-A2 yethu ingumkhiqizo ohlanganisiwe owakhiwe ngesilinganiso esiphakeme kakhulu somgogodla ongagcini umlilo ongagcwaliswa lapho ingxenye evuthayo ingaphansi kuka-10%. Ama-A2 Panels adlulisa yonke imibandela eqinile yokuphendula ezivivinyweni zomlilo ezitholakalayo. Isetshenziswa kunoma yisiphi isicelo semvilophu yesakhiwo noma ngabe ingaphandle nophahla lwangaphakathi, ukugqokiswa, uphahla noma i-façade.
I-Alucosun ® A2 ihambisana nezidingo ze-EN-13501 zohlelo lokuphepha komlilo i-A2, NFPA285 ne-ASTM E-119.
Ubukhulu Iyunithi Okujwayelekile Iyatholakala
Ubude mm 3050 ≤6000
Ubukhulu mm 4 3-6
Aluminium obukhulu mm 0.50 0.30-0.70
Imibandela Indlela Yokuhlola Iyunithi Inani
Izakhiwo zomzimba Ubukhulu - mm 4
Amandla adonsela phansi athile - I-Kg / M.3 2050
Isisindo - I-Kg / M.2 8.4
Ithempelesha. Ukuqhuba I-ASTM C 518 W / (mK) 0.45
Ithempelesha. Ukunwetshwa I-ASTM D 696 X 10-6 / ° C 19
Izakhiwo Zomshini Amandla eqine I-ASTM E8 I-MPa N / mm2 43
Ukunwebeka I-ASTM E8 % 3.8
2% Ukucindezela Kobufakazi I-ASTM E8 I-MPa N / mm2 41
Ukulahleka Kokudlulisa Komsindo Ukunciphisa Umsindo ASTME413 STC 27
Ku-Aluminium Composite Panels Izinto ezisemqoka zidlala indima enkulu ekunqumeni impahla yomlilo yesakhiwo. Ngaphandle kokudela noma yiziphi izakhiwo zalo eziyisisekelo i-Ocean Panels ACP - A2, i-ACP-FR yimikhiqizo eyenzelwe ukubhekela imikhuba yomlilo nokuphepha emhlabeni jikelele.
Ukuqhathaniswa Kokusebenza Komlilo
I-Alucosun FR-A2 I-Alucosun FR I-Alucosun PE
Ubukhulu 4 4 4
Izinto Zokushisa ku-Core <10% <30% <100%
Amazinga we-BS / EU I-EN13501-1 (A2 s1 d0) I-EN13501-1 (B s1 d0) -
Amazinga we-US I-NFPA 285 (Idlulisiwe), i-ASTM E119 (Idlulisiwe) I-NFPA 285 (Idlulisiwe), i-ASTM E119 (Idlulisiwe) -
Australia / New Zealand AS / NZS 1530.3 (Akukho ukuthungela) AS / NZS 1530.1 (Akukho ukuthungela) -
EJalimane I-En1187 (Kwenziwe) DIN41027 (Kuphumelele) I-En1187 (Kwenziwe) DIN41027 (Kuphumelele) -
ISingapore I-EN13501-1 (A2 s1 d0) I-EN13501-1 (B s1 d0) -
I-UAE EN13501-1 (A2 s1 d0) NFPA 285 (Kuphumelele) EN13501-1 (B s1 d0) NFPA 285 (Kuphumelele) -
Izinketho ezahlukahlukene zombala nokuqeda zenza i-Alucosun ACP ibe intandokazi oyithandayo yemvilophu yokwakha. Okunhlobonhlobo kwe-spectra, ukuqina kwekhwalithi yezinhlelo zokupenda kokuqedela njll. Kukwenza kube amasudi kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza lokufaka noma ngabe kuyibhizinisi lezentengiselwano, isakhiwo sodumo esinobunikazi obuyingqayizivele noma uphawu olumisiwe. I-Alucosun ACP inikela ngezinhlobonhlobo zamaphethelo ajwayelekile nawokwezifiso aphuma ngaphakathi kwendlu yokumboza ikhoyili. I-Alucosun ACP iphelile ebusweni nge-PVDF ne-NANO system yokupenda kunqubo eqhubekayo yokumboza ikhoyili eqinisekisa ikhwalithi nokuvumelana ngokuhambisana nemininingwane ye-AAMA 2605.
PVDF uhlelo lokupenda olunenhlaka engama-70% ye-PVDF yaziwa ngokumelana kakhulu nemisebe ye-UV kanye nemiphumela yezemvelo ngakho-ke i-Alucosun® ukusebenza okuhlala njalo nokungaguquguquki ezimweni zezulu ezimbi kakhulu.
FEVEupende baziwa ngokuqina kwabo okuhle kakhulu. Izici ezinhle kakhulu zamakhemikhali nezingokomzimba zalawo pende wekhwalithi ziye zaqashelwa kahle futhi zafakazelwa abasebenzisi bomhlaba wonke nabadwebi bezakhiwo kule minyaka engamashumi amane edlule futhi manje lokhu kusaqhubeka nsuku zonke.
I-NANO- PVDFuhlelo lokupenda lokuzihlanza. Uhlelo olunjalo lwePaint lunikeza ijazi elingezansi elicacile elenziwe ngezinhlayiya ze-NANO ezinqamule kakhulu ekugcineni kwe-PVDF; okuqinisekisa indawo ebushelelezi. Ubuso obushelelayo nobucacile benza ukungcola nothuli kunganamatheli okunikeza isakhiwo ukubukeka okuhlanzekile ngaso sonke isikhathi. Amasistimu kapende we-PVDF ne-NANO ahlala isikhathi eside aqinisekisa iminyaka eyi-15-20 yokuqeda iwaranti.
KUSHUNYISIWEamapaneli anezinketho ezahlukahlukene zokuqeda ayatholakala e-Alucosun kepha kuncike esikhathini esithile nosayizi ® ukulinganiselwa. Imvelo evikelwe ngamapaneli wesendlalelo se-anodized anokuqina okuqinile kokuklwebheka kunika iwaranti cishe iminyaka engama-30.
I-PE ne-HDPE upende usetshenziswa kabanzi kuzicelo eziningi ngenxa yobubanzi obuningi bemibala nokucutshungulwa komnotho, manje iminyaka yesiqinisekiso inganwetshwa isuke eminyakeni emi-5 iye eminyakeni engu-8 ngezinhlobo ezahlukahlukene zokumboza.
Yize ukusetshenziswa kwendabuko kwamaphaneli we-Aluminium Composite kungukufakwa kodonga nezicelo zokukhangisa, kulezi zinsuku sekusetshenziswa kabanzi emikhakheni ehlukahlukene njengokuhlobisa, umbukiso, izimoto ezinjengamaloli esitsha, izitimela, izindiza, imikhumbi, ifenisha, izinto zokwakha njll. engasetshenziswa ngokuhlanganyela nomcabango womklami nomakhi wezakhiwo ukubona ngeso lengqondo indalo enhle kakhulu. Ukungaguquguquki kwezinhlelo zokusebenza kusikhuthaza ukuthi siseshe futhi sithuthukise ukuqeda okungahambelani nokufaka ugqozi lokunikeza izinketho ezingenamkhawulo. Okunye ukuqeda okukhulu okutholakala emikhiqizweni yethu ye-Aluminium kunje ngezansi, kepha akugcini lapha; uma ungacabanga ukuthi singayakha.
※ NGOKWEMVELO - I-COPPER, IZINC, I-TITANIUM ENGASETSHENZISIWEYO
Izakhiwo zokudweba ze-Pvdf
Aluminium PVDF esinemthombo
S. Cha Amapharamitha Izinga Lokuhlola Umphumela
1 I-Gloss @ 60 degree I-ASTM D 523 20-80
2 Ukuzinza (T-bend) I-ASTM D1737-62 2T, akukho ukuqhekeka
3 Ukubuyisela emuva ukuguqula umthelela I-NCCA II-5 Akukho ukukhetha
4 Ukuqina-ipensela I-ASTM D3363 ≥2H
5 Ukunamathela I-ASTM D3359 Akukho ukukhetha
Yomile Indlela 8 Akukho ukukhetha
Kumanzi 37.8 ° C, amahora angu-24 Akukho ukukhetha
Amanzi abilayo 100 ° C, imizuzu engu-20
6 Ubukhulu Bopende (μm) AAMA2604 I-25-36 μm incike kungqimba yokumboza
7 Ukumelana nolaka I-ASTM D968-93 40 l / mil
8 Ukumelana Namakhemikhali I-ASTM D1308-87 Alukho ushintsho
Ukumelana Ne-asidi I-ASTM D1308-87 Alukho ushintsho
Alkali Ukumelana I-ASTM D1308-87 Alukho ushintsho
Ukumelana ne-Solvent I-AAMA 2605-05 Alukho ushintsho
9 Isimo sezulu-o-imitha test: I-ASTM D2244-93 UMax. Amayunithi ama-5 ngemuva kweminyaka eyi-10
Ukugcinwa kombala I-ASTM D523-89 Min 50% ngemuva kweminyaka eyi-10
Ukugcina isicwebezelisi I-ASTM D4214-89 UMax. Amayunithi ayi-8 emibala & 6
Ukumelana ne-chalk Okomhlophe ngemuva kweminyaka eyi-10
10 Usawoti spray ukumelana I-ASTM B117-90 Ukudlula (400hrs X5% NaCl)
11 Ukumelana nomswakama I-ASTM D2247-94 Awekho amabhamuza Ngemuva kwamahora angama-4000, i-100% RH, i-38 ° C
Indlela Enconyiwe Yokuhlanza
Ubungako nobunjalo bokuwashwa kwesakhiwo kuzoncika kokuqukethwe noma kohlelo, indawo okuyo nendawo okuyo ngaphakathi kwesakhiwo, nezinga lokuhlanza elidingekayo. Ukugcinwa okujwayelekile kungumsebenzi obonwa ngokujwayelekile njengokudingekayo ukufeza ukuqina okulindelekile.
Bambelela kubakhiqizi noma kubaphakeli bezincomo zesondlo Ngesikhathi sokuhlanza, imishini yokufinyelela enjengezitebhisi, isiteji, iscaffold esingumahamba nendlwana, abacoshi bama-cherry noma okufanayo, kufanele ilungiswe ngamaphayiphu ukuvikela amapaneli emthelela. Ukuhlanza okungafanele okuholela ekulimaleni kokumboza ngeke kuhlanganiswe ngemigomo nemibandela yesiqinisekiso somkhiqizo.
Ungasebenzisi izincibilikisi ezinamandla eziphilayo.
Ungasebenzisi i-alkali eqinile, i-asidi eqinile noma izihlanza ezi-abrasive. Uma kusetshenziswa la manyala namanzi okugeza, upende ungakhukhumala, uqhume noma uqhekeke.
Ungasebenzisi amanzi anomfutho ophakeme ukuhlanza ngoba lokhu kungadala ukulimala kwi-joint sealant noma kubangele ukuthi kususwe upende. Ukuqhumisa amanzi akunconywa.
Ungahlanganisi ama-cleaner ahlukene. Uma abahlanzayo bedinga ukuxutshwa, ama-ase amaningi alandela imiyalo yokwenziwa.
Gwema ukushisa okwedlulele ukuhlanza indawo eboshwe. Izindawo ezishiswa yilanga (ngenhla kuka-40 ℃) zingasheshisa ukusebenza kwamakhemikhali futhi zingahwamuka amanzi asuke kusixazululo ashiye izinsalela namabala. Ngokuphambene nalokho, ukushisa okuphansi ngokweqile kunganikeza imiphumela emibi yokuhlanza.
I-Alucosun ®ibhizinisi leWisdom Metal Composites Ltd eletha imikhiqizo ephuma phambili ngokubambisana nendawo yethu yokukhiqiza edumile eseJiangsu, enolwazi olucishe lube ngamashumi amabili eminyaka ku-Aluminium Panel Industry. I-Alucosun a®brand enakekela zonke izidingo zephaneli yakho yokwakha, Ifakwe zonke izinto ezisendlini ukuqinisekisa umkhiqizo wekhwalithi nokuzibophezela kokulethwa. Sinikeza imikhiqizo engcono kakhulu ngokuphelela okuphelele; kufinyelelwe ngenhlanganisela ekahle yochwepheshe bemboni, ubuchwepheshe bamuva nemishini eyindida. Isikhungo esakhiwe ukukhiqiza ngaphezulu kwe-10Million M2 ngonyaka, nezitshalo ezintathu (3) zokukhiqizwa okuhlukahlukene kwePaneli, i-Colour Coating kanye neLaboratory yangaphakathi nendlu ehlome kahle.
I-Alucosun®isebenza kuyo yonke iMpumalanga Ekude, eMpumalanga Ephakathi, eLatin America, eYurophu naseMelika. Amahhovisi ethu ezifunda, osomabhizinisi, amanxusa kanye nabasabalalisi kuso sonke isifunda asenza sikwazi ukuhlangabezana nezidingo zakho zezinto zokwakha nezinsizakalo zokuxhasa noma ngabe ukuphi lapho ukudinga khona.
Langaphambilini I-ALUMINUM COMPOSITE PANEL
Olandelayo: I-Alucosun FR